”7 bilood baan A-kassa jawaab ka sugayaa?” – Dhibaato haysata dadka ku shaqa beelay karoonaha | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”7 bilood baan A-kassa jawaab ka sugayaa?” – Dhibaato haysata dadka ku...
”7 bilood baan A-kassa jawaab ka sugayaa?” – Dhibaato haysata dadka ku shaqa beelay karoonaha
(Gothenburg) 21 Agoosto 2020 – Waxaa aad u dheeraaday safafka sugitaanka Khasnadda Caymiska Shaqa la’aanta ee A-kassa, kaddib markii ay bateen dadka ku shaqo waayey xasaradda dhaqaale ee ka dhashay cudurka Covid-19.
Catarina Eklund Ahlgren oo ah sharci yaqaanad ka tirsan Guddiga Kormeerka Caymiska Shaqaalaha ayaa sheegtay inuu sugitaanku qaadan karo bil ilaa 4 bilood.
Ha yeeshee, waxaa A-kassa jawaab muddo 7 bilood ah haatan ka sugaya welina ka la’ Axmed Daahir oo ka mid ah dadka dalabku u maqan yahay.
Previous article”Ma jirto cid naga baarta cudurka Covid-19” – Dugsiyada Sare ee Sweden oo dib loo furay & dhallinyarada Soomaalida ah oo ka hadashay arrin dhib keeni karta (Dhegeyso)
Next articleSirta ka dambaysa Taliska Maraykanka ee AFRICOM (Qaybtii 2-aad maqaal xog warran ah)